musha UNITED UMAMBO FOOTBALL STORI Vatambi Vanotamba Yevatambi Jordan Henderson Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius inonyatsozivikanwa neNickname; "White Yaya Touré". Yedu Jorodhani Henderson Childhood Indaba pamwe Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvekwanisiro ake asi vashomanana vanoona yedu Jordan Henderson Biography iyo inonakidza chaizvo. Iye zvino kunze kwekuwedzera kwaunoda, rega Tanga.
Jordan Henderson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Jorani Brian Henderson akaberekwa musi we 7th munaJune 1990 muTyne uye Wear, Sunderland, United Kingdom naamai, Liz Henderson (mutano wezvakanaka) uye baba, Brian Henderson (mupurisa wepamberi).
Jorodhani yakadzidziswa kuFarringdon Community Sports College. Akabva aenda kunobatanidza Sunderland sediki (age 6). Vose Joridhani nevabereki vake vose vaiva vabati veHotderland.
Pazera remakore 7, Jordani shomanana yakatanga kushanda semuiti wepamberi uye werudyi. Akazoshandura kusvika pakati pekupedzisira, basa raakaramba achiita kusvikira ave munhu mukuru.
Akanga ari chikamu chechikamu cheBlack Cats U18 yechipfuva chakakonzera mitezo yezvekudzokera shure.
MunaJanuary 2009, Henderson akabatana neMichampionship club Coventry City pamutengo wemwedzi mumwe chete. Mushure mekunge atora kukuvadzwa, kuputsika kune chechishanu metatarsal bone patsoka dzake, akadzokera kuSadderland muna April 2009.
Pana 9 June 2011, Henderson akaendeswa kune Liverpool nokuda kwemari isina kufanirwa, inofungidzirwa kuva pakati pe £ 16 ne £ 20 mamiriyoni. Akazova mutungamiri weLiverpool muna 2015 mushure mekubva kwa Steven Gerrard. Vamwe vose sezvavanotaura ikozvino nhoroondo.
Jordan Henderson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Jorodhani inobva kuStartland mapoka emhuri yemhuri. Baba vake, Brian akanga ari mupurisa wepamberi wepamutemo uyo akambotamba mutambo webhola kuPurham mapurisa ebato.
Brian Henderson akamboratidza kuti akachengetedza sei hondo yake yekenza - kuti arege kuita kuti mwanakomana wake aite-pamunda maitiro. Akaonekwa kuti ane chirwere ichi munaNovember, 2013 seMedics akawana tumarara mumutsipa wake. Uku kuwanikwa kwakaitwa paainge aine cyst yakabviswa. Mamwe mimwe miedzo yakaratidza kuti akanga ane carcinoma yehuro pake uye chirwere pamutauro wake.
Brian Henderson akakurumidza kuputsa nyaya kumwanakomana wake webhola munguva yechinhu chinokosha chekupedzisira kwegore, sezvo Reds yakatanga mutambo unotarisirwa gore iroro.
Akaudza mwanakomana wake nguva pfupi asati ava kuda kuvhiyiwa pamutsipa uye mutauro mumwedzi yekutanga ye 2014. Mushure mokuputsa nhau dzinosuruvarisa, Brain yakakumbira Jorodhani kuti isanetseka, pane kudaro inofanira kuisa pfungwa pakuisa muMunhu wese weMitambo maitiro sezvaaigona.
Brian, uyo akazowanazve chirwere ichi, akati: "Yaiva nguva yakaoma zvikuru pandakafanira kuputsa nyaya kumhuri."
AMAI: Mumudzimai waJordan Henderson, Liz muyanzvi wehutano hwehutano.
Jordan Henderson Amai- Liz Henderson
Kunze kwekutarisira vana, Liz Henderson ndiye ane mhosva yehupenyu hwepanyama nehupfungwa hwemwanakomana wake, Jordan. Unyanzvi hwake hunoonekwa muhupenyu hwomwana wake uye pabasa rake.
Jordani ine hanzvadzi yemwana anonzi Jody Henderson.
Jordan Henderson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Kana ari hupenyu hwake hwega, Jorodhani haanwi, kusvuta kana kufara. Akanga ari murudo nemukadzi mumwe chete hupenyu hwake hwose. Haasi mumwe kunze kweRebecca Burnett anoshamisa.
Jordan Henderson nemudzimai, Rebecca Burnett.
Vane mwanasikana akanaka kwazvo nezita, Elexa Henderson.
Jordan Henderson Upenyu hweMhuri
Brendan Rodgers kamwe anonyadzisa kuita kwaHenderson mushure mokunge mudzimai wake abereka mwana wechipiri. VaReds vakamira muchengeti vakapedza usiku huno vachienda kuberekwa kwechipiri mwana wavo Alba vasati vadzokera zvakare kutungamirira boka rake kukunda paWembley. Akarangarirwa kuti akaudza chiremba weHsopital ... "Pakarepo kana mwana ari kunze, ini ndichadzoka"...
Avo avo vari pedyo zvikuru nemhuri yavo vanoziva Jordani ane hupenyu hune hupenyu hwakakwana naRebecca Burnett. Pasi paJordan Henderson pamwe nemudzimai wake Rebecca Burnett vachienda kunotenga kuManchester mberi kweChristmas Krismasi.
Jordan Henderson anotora mukadzi kunze kwekutenga Krisimasi
Kunge Roberto Firmino uye Philippe Coutinho, Joridhe hupenyu hwake hworudo uye rudo nyaya inoratidzika uye yakarurama.
Jordan Henderson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Akarasikirwa Kuremekedza Giggs
Jorodhani sechecheche pane imwe nguva yaiti akaonana Ryan Giggs paMarkcan beach kuSpain. Mumashoko ake."Ndinoyeuka izvi zvisiri izvo asi ndaive muduku chaizvo. Handifungi kuti aizoyeuka zvachose. Ndinofungidzira Ryan Giggs aiva muenzaniso kwandiri. Iwe unoona vanhu vakawanda mumapepanhau nekuda kwezvikonzero zvisina kunaka asi naGiggs hauzombonzwa nezvake. "
Joridhani rakarashika ruremekedzo rwake Giggs mushure mekusimbisa nhau dzisina kunaka pamusoro peManchester United Legend vane hukama nemudzimai wehanzvadzi yake. Kubva panguva iyo, akava muvengi kunyange pamusana.
Jorodhani ine zvinyorwa zvakasungirirwa neRange Rover iyo chiratidzo cheKunokwanisa kwayo, Kushongedza & Kudzokorora.
Range Rover yaJordan Henderson
Kudzoka, Joridhani yaishandiswa kuendesa motokari yemitambo yakaderera. Heino mufananidzo wakare wepakati maestro maestro vekare veBebo, mukubwinya kwayo kose.
Jordan Henderson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -The Uncurable Injury
Jorodhani Henderson akamboudza kuti hapana chirwere chekurapa kwekukuvara kwechitsinho chakambomumanikidzira kuti asapotsa mwedzi mitatu yeLiverpool ya 2015 season. Akaudzwa kuti aifanira kurarama nemarwadzo kwehupenyu hwake hwose.
Akaputsa metatarsal mucheka rake rwerudyi munguva yekurovedza.
Henderson akati mumarwadzo;
"Zvave zvisinganzwisisiki zvakaoma, kwete chete kwandiri asi kune vashandi pamwe chete. Ne metatarsal yangu ini ndaiziva kunyatsoziva kuti ndedzipi nguva yenguva yandichazove nayo. Asi nechitsitsinho changu hapana nguva, asi hachisi chirwere chaiyo. Icho chaive chiri chikamu chakaoma zvikuru. Zvave zvakaoma. Ndabvumirana kutakura kurwadziwa uku kwehupenyu hwangu hwose. "
Jordan Henderson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Imwe inopomerwa kuti inodhadharwa
Damien Comolli, wekare weLiverpool mutungamiri wenhabvu uyo ​​anobvuma kubhadharisa £ 20m yeHenderson akambozviti iye anotsigirwa pamusoro peredhiyo rehurumende kuti chikwata chichimutora, kutya kweHenderson kusayina kwaive kuri kukanganisa kukuru.
Izvi zvakaitika mushure mokunge Jordan Henderson achinetseka kuti agadzirise mukutanga kwake kweLiverpool kutanga. Panguva iyoyo, Joridhani yakava pedyo nekutengeswa naRodgers. Mukati unofanirwa wakafanana wakaenderera mberi kuenda kuFulham - mushure mekunge aiswa mune chimwe chikamu chekugoverana kweClint Dempsey.
Henderson panzvimbo pacho, akachera tsoka dzake uye akasimbisa kuti akanga asiri kuenda kupi zvako. Icho chaive chisarudzo icho pakupedzisira chakazosimbiswa. Kuva akakwanisa kudzorera kubva kumashure-shure kwave kushandiswa kwake kubva paudiki hwake.
Jordan Henderson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Inotamba imwe Mitambo
Kufanana nebhola, Henderson akashanda zvakanaka pa badminton uye patafura tennis, kunyange zvazvo paiva nekutya aisazoita gorosi semutambi wenhabvu nokuti akatambura nechipatara, Osgood-Schlatters.
Jordan Henderson Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Chimiro cheMutambo
Henderson inotamba semudziri webhokisi-to-box uye inowanzoonekwa somutambi anoshanda nesimba uye anounza simba kune rimwe boka. Zvinotsanangurwa se "Mutambi wemitambo uye anoshingaira," Henderson akagadzira mutsara wake panguva yake paLiverpool kupinda mune rimwe mutambi wekusika. Uyezve, anoramba achinyanya kukwira mumunda chero nguva apo kushorwa kuripo.
Yordani ndiyo yaiva yekutanga ye17 yemakore yakamboshevedzwa mumutungamiri wekutanga weague team yemwaka.
Akatumidzwa mu 442 magazini yepamusoro 20 pasi pevatambi ve 21 munyika ine vanhu vakaita sazvo Messi, Fabregas, Aguero, Nani, Bojan, Benzema, Pato uye Walcott.
Pasina mubvunzo, Joridhani zvirokwazvo ari munzira yake kuva Liverpool Legend.
Adebayo Akinfenwa Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts